theZOMI: Burma News International - April 3, 2013
Burma News International - April 3, 2013
A leading oil security expert has weighed in on the potential dangers of operating twin gas and oil pipelines in northern Shan state while fighting between the Burma army and the Kachin Independence Army (KIA) is ongoing near the pipeline route.
RCSS/SSA appeal for the observation of terms outlined in cease-fire agreement with Myanmar government
The Restoration Council/Shan State Army(RCSS/SSA) sent an official letter to the Myanmar government asking them for clear demarcations of military controlled areas in the region after repeated clashes sinceaceasefire was inked in December 2, 2011.
Burma army clashes with KIO in Shan state continue
The entrance of KIA's 4th Brigade headquarters in Loikang, Kutkai Township in northern Shan state.
Ta’ang celebrate literature and culture
Many people attended the 10th Ta’ang Literature Conference and Shwe Phe Tea season festival in Mantung Township in northern Shan state.
Landmine kills Burma army soldiers, villagers threatened
According to SHAN sources,aBurmese unit from Light Infantry Battalion (LIB) 324 patrolling in Mong Yen tract, east of Namtu, northern Shan State, stepped on the landmines causing death and injuries.
Inareport released on April 1, Human Rights Watch (HRW) has called for the Myanmar government to thoroughly investigate and punish those responsible for the recent riots in Meiktila and central Myanmar.
Myanmar owes much of its new-found success to President Thein Sein’s prioritized and action-oriented style of governance, says Indian analyst Col. R Hariharan. Photo: Ye Min / Mizzima
KIO နှင့် အစိုးရ မြစ်ကြီးနားမှာ တွေ့ကြမည်
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ တွေ့ဆုံမည်ဟု ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် PCG မှ ဦးအင်စင်းဆန်အောင် က ပြောသည်။
မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်၍ ရခိုင် ၁၄ ဦး အရေးယူခံထားရ
မတ်လမှ စ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆန္ဒပြမှုများ အပါအဝင် လတ်တလောမတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ရခိုင်အမျိုးသား အနည်းဆုံး ၁၄ ဦး အရေးယူခံထားရကြောင်း ရခိုင်လူမှုကွန်ယက် တာဝန်ရှိသူများ က ဆိုသည်။
သျှမ်းပါတီပေါင်းစည်းရေးအတွက် ကျားဖြူပါတီမှ ကော်မတီဖွဲ့စည်း ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူက ဘာတာဝန်ဆိုတာကိုလည်း ခွဲဝေထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီး ကျားဖြူပါတီဝင်များတွေ့ဆုံစဉ် ပါတီဥက္ကဌဖြစ်သူ စိုင်းအိုက်ပေါင်း က ပြောသည်ဟုသိရပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဌ နန်းခင်ထွေးမြင့် ဘုရားသုံးဆူ မြို့ရှိ ပါတီဝင်များကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံ
ကရင်ပြည်နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဌ နန်းခင်ထွေးမြင့်သည် ဘုရားသုံးဆူမြို့ ရှိပါတီဝင်များကို ယမန်နေ့ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကာဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဟုသိရသည်။
ဖားအံမြို့နယ်အတွင်း ဘိလပ်မြေစက်ရုံသစ်များတည်ဆောက်ရေး ဒေသခံများမလိုလား
ကရင်ပြည်နယ်၊ဖားအံမြို့နယ်အတွင်း ဘိလပ်မြေ စက်ရုံသစ်များ တည်ဆောက်လာပါက ဒေသခံများ အတွက် စားဝတ်နေရေးအပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် များကို ပါထိခိုက်လာနိုင်သဖြင့် ထပ်မဆောက်လုပ် ကြရန် ဒေသခံများ အနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ တင်ပြမည်ဟု ဒေသခံများ၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ အကူအညီ
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်အတွင်းမှာ ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်း နှစ်ခုရှိပါတယ်။ မယ်ဟောင်ဆောင် မြို့ကနေ အမှတ် (၁) စခန်းကို ကားဖြင့်သွားလျှင် တနာရီလောက်တောင် မမောင်းရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စခန်း (၂) ခါကျတော့ သုံးနာရီဝန်းကျင်လောက် သွားရပါတယ်။ တချိန်က စခန်း ၂ ခုအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ ကရင်နီ ဒုက္ခသည်တွေဟာ စခန်းတခုနဲ့တခု အပြန်အလှန် ၀င်ထွက်သွားလာလို့ ရပါတယ်။
စာသင်ကျောင်းများရှိရာ ကျေးရွာတိုင်းသို့ ကျောင်းဆရာ/ မများ ကျောင်းတိုင်းစေ့ မရောက်နိုင်သေး
ကယားပြည်နယ်တွင် စာသင်ကျောင်းများရှိရာ ဝေးလံခေါင်ပါးတဲ့ ကျေးလက်ကျောင်းတိုင်းသို့ ကျောင်း ဆရာ/မများ ကျောင်း တိုင်းစေ့အောင် သွားရောက်တာဝန် မထမ်းဆောင်နိုင်သေးကြောင်း ကယားပြည်နယ် ဗမာတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ဦးစိန်ဦး က ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်) ၌ KIA တပ်အား အစိုးရတပ်ဆက်လက် ထိုးစစ်ဆင်နေ
အစိုးရတပ်သည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) နယ်မြေသို့ ဆက်လက်၍ အင်အားတိုးချဲ့ကာ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း သိရသည်။